Akon'ny famangiana Fnkvn RAOELISON sy vaovao farany Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Toriteny2 alahady 23/11/2014 | flm-orleans.org
Perikopa Loterana Janoary 2015
Akon’ny famangiana fianakaviana RAOELISON sy vaovao farany
Manoloana ny fahoriana manjo tamin’ny nahalasanan’i Atoa RAOELISON Andry Marc, zanaky ny kristiana mpandray fanasan’ny Tompo eto amintsika, dia tonga nitondra ny teny fampaherezana ny Fiangonana.
Famangian’ny Faribohitra F7
Ny ampitson’ny nahafatesan’i ratompokolahy (sabotsy 22/11/2014) dia tonga tany an-toerana (Tours) ny faribohitra F7 (Blois sy ny manodidina), notarihan’ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON, niaraka tamin’ireo mpiara-mivavaka.
Ny teny tao amin’ny Jaona 16 :33 no nentin’izy ireo tamin’izany.
« Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao. »
Antso avo sy fampandrenesana
Noho ny fahasahiranana samihafa ateraky ny fandefasana ny razana any an-tanindrazana, dia tamin’io fotoana io no namolavolana ny ANTSO AVO FIFANAMPIANA ho an’ny Fiangonana sy novelarina ho an’ny Malagasy sy ireo tsara sitrapo, hanohanana ny Fianakaviana. Napetraka tamin’ny fikambanan’ny mpianatra Malagasy tao Tours ny fanapariahana izany ho an’ny be sy ny maro (gazety sy serasera Malagasy eto Frantsa, tambazotra sosialy, fikambanana mpiara-miasa, Malagasy mpiara-monina, mpiara-mianatra, solotenam-panjakana Malagasy, sns…), ary tamin’ny FLM Orléans kosa ny ho an’ny Fiangonana anivon’ny Synodam-Paritany.
Famangian’ny Faribohitra F8 sy ny Fiangonana FLM Orléans
Ny zoma 28/11/2014 farany teo kosa no namangy ny faribohitra F8 (Tours) sy ny Fiangonana, notarihin’ny Raiamandreny Pastora RASETA, niaraka tamin’ireo mpiara-mivavaka avy ao Chanteau, Blois ary Tours.
Ny teny tao amin’ny Apokalipsy 3:20-22 no nentina ho fampaherezana tamin’izany.
« Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.
Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin’ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin’ny Raiko eo ambonin’ny seza fiandrianany.
Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana. »
Ny fotoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra alohan’ny hodian’ny razana an-tanindrazana dia atao ny alatsinainy 01 desambra 2014 ho avy izao, eny amin’ny efitrano fivavahana eny amin’ny hopitaly CHU TROUSSEAU Tours [Avenue de la République, 37170 Chambray-lès-Tours].
Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana Orléans no hitarika izany, ary anasana ny Fiangonana manontolo ny fotoana, ifanotronana.
Amin’ny 10:45 ka hatramin’ny 11:20 atoandro no anatanterahana izany.
Ny fianakaviana dia mbola eo am-panangonana ny hoenti-manana rehetra, satria mbola tsy am-pelatanany ny vola.
Famporisihina sy fisaorana
Ety am-pamaranana dia manainga antsika rehetra tompoko hitondra am-bavaka mandrakariva azy mianakavy. Dia Jesosy anie, hanafy hery azy ireo ary isika kosa samy ahay ifampitondra sy aneho fitiavana fa izany no ahafantarana fa Mpianatr’i Jesosy tokoa isika.
Dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana indrindra tompoko.